Home Wararka DF oo go’aan yaab leh ku taageertay Sacuudiga xilli cadaadis uu kaga...
DF oo go’aan yaab leh ku taageertay Sacuudiga xilli cadaadis uu kaga imanayo caalamka intiisa kale
Dowladda Soomaaliya ayaa markale taageero u muujisay dowladda Sacuudi Carabiya ka dib markii Caddaadis ay saareen Qaar ka mid ah dalalka Caalamka, sababo la xiriira weriyaha la la’yahay ee Sacuudiga Jamaal Khashoggi.
Jamaal Khashoggi aayaa la arkay tan iyo saddexdii bishan October markaasi oo uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbuul, waxaana la tuhusan yahay in lagu dhex dilay halkaas.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre uu booqasho ku tagay magaalada Riyadh, waxaana uu kulamo la qaatay Boqorka Sucuudiga iyo Dhaxalsugaha Maxamed Bin Salman
Previous articleGudoomiye Yuusuf Daba-geed oo sheegay in uusan Aqbali doonin Fara-gelin lagu sameeyo Maamulka Gobolka Hiiraan!!
Next articleDegmooyinka Gobolka Banaadir oo loo dal-bay Ciidamo Xoogan si ay amniga u xaqiijiyaan!!
Maxa looga hadlay kulankii deg-dega ahaa ee xalay ka dhagay Garowe
RW Itoobiya oo xabsiga dhigay mucaaradkii labaad & xaaladda oo cirka...